Caafimaadka dhimirka - InfoFinland
Nolosha Finland > Caafimaadka > Caafimaadka dhimirka
Qofkasta ayaa cawinaada u baahan kara marka ay xaalado nololeed oo qalafsan la soo darsaan. Kaligaa ha isku koobin dhibaatooyinka ku haysta. Finland waxaa caawimaad ka bixiya tusaale ahaan rugaha caafimaadka iyo bolikiliinikooyinka caafimaadka dhimirka iyo teraabiistayaasha iyo dhakhaatiirta gaarka ah.
Goormee ayaa caawin loo baahan yahay?
Xaaladaha nololeed ee adag waxay mararka qaar noqon karaan tusaale ahaan waddan laga guuro oo mid kale loo guuro, dhibaatooyinka goobta shaqada ama weynta shaqada. Dhibaatooyinka qoyska, furriinka, dhimashada ehelka, jirro ama isbeddel nololeed kale ayaa noqon kara xasarado dartood caawimaad looga baahan yahay. Xittaa arrin wanaagsan, tusaale ahaan dhalashada cunugga ayaa nolosha aad u beddeli karta, taas oo keeneysa in xaaladda darteed taageero loo baahdo. Mararka qaar waxaa si lama filaan ah kuugu soo boodi kara dareen xun, ka dib marka uu wakhti ka soo wareego waay-aragnimadii adkayd isla markaasna ay noloshu degto.
Wey habboon tahay inaad caawimo raadsado, markaad dareento siyaabahan:
culeys dhanka nolosha
inaadan awoodeyn shaqo inaad aado dadkana aadan la kulmin
astaamo jiro jirka, oon haddana xal loogu helin cilmiga caafimaadka
isticmaalka mukhaadaraadka iyo qamriga ood siyaadsatey
Ma ahan wax aan caadi ahayn inaad caawinaad la xiriirta caafimaadka dhimirka dalbatid. Finland 20% ayaa dadka mar uun noloshooda lasoo gudboonaato dhibaato walbahaar.
Xagee cawinaada laga heli karaa?
Inta badan waxaaa, isla mar ahanaatiiba wax ka geysta qoyska ama reerka. Mararka qaarse waa loo baahdaa caawimo cid kale. La sheekeysiga kalkaalisada caafimaadka (terveydenhoitaja), dhakhtarka (lääkäri) ama cilminasigu (psykoterapeutti) si wadajir aha waad ugala sheekeysan kartaa, kaalmo sidee ah ayaa kugu habboonaan laheyd.
Caawimadu inta badan waa baxnaanin, daawo ama labadaba. Mararka qaar waa suurogal in loo baahdo daryeelka isbitaalka ah. Daryeelka isbitaalkuna wuxuu qaataa ilaa dhowr sitimaan. Ujeedkuna wuxuu yahay in bukaankii ku laaban karo guriga sida ugu dhaqsiyaha badan. Kadibna daryeelkii lagu siiyo guriga.
Haddii aad Degan Degmo ku yaalo Finland, marka hore la xiriir rugtaada caafimaadka (terveysasema). Rugaha caafimaad inta badan waxay furan yihiin isniin ilaa jimce qiyaastii saacadaha 8-16. Wac rugta caafimaad haddiiba subaxdii waqtina ka qabso. Haddii aad u baahan tahay cawinaad deg deg ah, ugu sheeg telefoonka markii aad wacaysid. Haddii loo baahdo dhakhtarka ayaa kuu qoraya warqad uu kuugu dirayo poliklinikada cudurada dhimirka (psykiatrian poliklinikka) ama isbitaal kale oo qaabilsan cudurada dhimirka. Poliklinikada si toos ah uma aadi kartid adigoon wadan warqad uu dhakhar kuugu qoray inaad u tagto.
Dhakhtartka ama daweeyaha cudurada dhimirka waxaad arimahaaga ugula hadli kartaa si aaminaad iyo kalsooni leh amaba sir ah. Waxaa waajib ku ah sir celinta. Arimahaaga uma sheegayo masuuliyiinta kale ee dawlada. Haddii macluumaadkaaga ay u baahado waxa kale oo xagga daryeelka caafimaadka ah, siinta macluumaadka adiga ayaa si gooni ah ruqso laguu weydiinayaa.
Rugtaada caafimaadka waxaad ka heleysaa macluumaad sugan oo la xiriira, sida degmadaada looga heli karo adeegyada daryeelka cudurada dhimirka.
Haddii aad ka walwalsan tahay ehelkaaga inuu caawimo u baahan yahay, waad weydiin kartaa talo kalkaalisada caafimaadka ama dhkhtarka rugta daryeelka caafimaadka.
Macluumaadka dheeraadka ah ee laxiriira xaaladaha kala duwan ee dhibaatada waxaad ka heli kartaa InfoFinlandi bogga Xaaladaha dhibaatada.
Adeegyada caafimaadka dhimirkaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush
Adeegyada caafimaadka dhimirka ee gaarka loo leeyahay
Sidoo kale waxaad waqtiga dhakhtarka dhimirka ma kan cilmunafsiga ka qabsan kartaa xarunta dhakhtarka gaarka loo leeyahay. Xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyhaay waxaa laga yaabaa in sida badan degdeg waqti looga helo, laakiin macaamiisha aad ayuu qaali ugu yahay aaditaanka xarunta caafimaadka gaarka loo leeyahay.
Xafiiska caymiska hawlgabka qaranka (Kela) ayaa bixinaya qayb ka mid ah kharashka dhakhtarka gaarka loo leeyahay, haddii aad ku jirtid xayndaabka caymiska jirada ee dalka Finland. Wixii dheeraad ah weydii xafiiska Kelada.
Magdhawga aan Kelada xaqa ugu leenahay waxaan si toos ah uga jari karnaa xisaabta aan qasnada ka bixineyno. Horay u sii qaado shahaado cadaynaysa inaad ku jirtid xayndaabka caymiska jirrada. Sidoo kale magdhawga Kelada waxaad dib uga dalban kartaa xafiiska Kelada.
Wixii warar dheeraad ah ka akhriso InfoFinlandi bogga Badbaada Bulshda ee Finland.
Markii cawinaada si deg deg ah loogu baahanyahay
Haddii aad isleedahay cawinaada si deg deg ah ayaad ugu baahan tahay, waxaad la xiriiri kartaa xarunta xaafimaadka heeganka ah ee kuugu dhaw ama isbitaalka. Daryeelka caafimaadka dhimirka ee deg degta ah waxaa bixiya qaybaha heeganka ah ee isbitaalada cudurada dhimirka.
Haddii ehelkaagu halis galinayo naftiisa ama cid kaleba diidana inuu la aado dhakhtar waxaad wici kartaa rugta caafimaadka ama isbitaalka. Haddii caawimo degdeg ah loo baahan yahay, ugu sheeg teleefonka. Ugu sheeg sidoo kale hadaad ka baqeyso inuu nafsadiisa waxyeeleynayo ehelkaagu.
Haddii qofka qaraabadaada ah ay xaaladiisa caafimaad liidato uuna u baahan yahay daryeel caafimaadka dhimirka oo degdeg ah, waxaa suurtogal ah in loo diro daryeel caaafimaad, si kasta oo uusan asagu u rabin. Tani waxay u baahantahay in dhakhtarku uu uqoro warqada daryeelka qasabka ah (pakkohoitolähete). Haddii qofka ay naftiisu khatar muuqata ku jirto, waxaad wici kartaa lambarka xaaladaha degdega ah 112. Ha wicin lambarka xaaladaha degdega ah, haddii aysan xaaladu deg deg ahayn.
Cawinaad ku dalbashada telefoonka
Telefoonka xaaladaha cakiran ee afka Iswiidhishka: 09 2525 0112
Haddii xaalada uu ilmuhu ku sugan yahay ay tahay mid culeys ku haysa caafimaadka caafimaad-qabka maskaxdaada, waxaad la xiriiri kartaaa xarunta hooyada iyo dhallaanka (perheneuvola) ee degmada aad degan tahay. La talinta qoyska ee xarunta hooyada iyo dhallaanka waxaa lagu karteyaa xaalada ilmaha, si uu ilmuhu u helo cawinaada asaga ku haboon. Waxaad waqti ka qabsan kartaa dhakhtarka cilmu nafsiga ee xarunta hooyada iyo dhallaanka (lastenneuvola) ama dhakhtarka rugtaada caafimaadka ee degmadaada. Haddii uu ilmuhu da'da iskuulka gaaray, waxaad la xiriiri kartaa dhakhtarka cilmunafsiga ama dhakhtarka caadiga ah ee iskuulka. Macluumaadka dheeraadka ah ee la xiriira cawinaad u helida carruurta xaaladaha dhibaatada waxaad ka heleysaa InfoFinlandi bogga Xagee caawimaad looga helaa dhibaatoyinka carruurta iyo dhalinyarada?
Haddii aad tahay dhallinyaro, waxaad arrimaha aadka u adag u sheegi kartaa tusaale ahaan kalkaalisada/kalkaaliyaha caafimaadka ee iskuulka, dhakhtarka iskuulka, dhakhtarka cilmunafsiga ee iskuulka ama macallinka iskuulka u qaabilsan arrimaha dhibaatoyinka. Waxaad kaloo la xiriir kartaa rugtaada caafimaadka. Dhakhtarku wuxuu kuu qori karaa warqad uu kuugu dirayo poliklinikada dhimirka ee dhalinyarada (nuorisopsykiatrian poliklinikka), haddii loo baahdo. Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira cawinaada dhalinyarada xaalada qasafsan ku jira waxaad ka heleysaa InfoFinlandi bogga Xagee caawimaad looga helaa dhibaatoyinka carruurta iyo dhalinyarada?
Isku-xirka dhallinyaradaFinnish | Iswidish
Kaalmooyinka waalidka loogu talagalayFinnish | Iswidish
Daryeelka caafimaadka ee Macaahida ayaa ardayda siiya adeegyada caafimaadka dhimirka.
Adeegyada caafimaadka ee shaqaalaha
Haddii aad shaqaysid, waxaad arrimaha caafimaadka dhimirka la xiririra kala hadli kartaa dhakhtarka shaqaalaha. Waxaa laga yabaa inay macquul tahay in daryeelka caafimaadka shaaqaluhu uu leeyahay qaabilaad ah xagga cudurada dhirmirka.
Gocashooyinka la soo maray
Haddii aad soo martay gocashooyin uur ku taallo leh, waa muhiim in aad caawimaad codsataa. Gocashooyinka la soo maray waxay xiriir la lahaan karaan tusaale ahaan raacdeysasho, takoorid, xoog-sheegasho, kufsi, dagaal ama jirdil. Waxyaabaha lala kulmo oo noocan oo kale ah waxay sababi karaa cillado walaaco oo gocosho ka dhashay. Waxaa loola jeedaa, in sawirada xusuusta ee gocashada la soo maray ay qalbiga qasab ku soo gelayaan marka lagu jiro xaalado kala duwan iyagoona sababaya walaac xooggan.
Cillada walaaca ee gocashooyinka ka dhasha waad ka bogsan kartaa caawimaadna waad u heli kartaa. La xiriir rugtaada caafimaadka dhakhtarkana u sheeg xaaladdaada. Wuxuu kuu qorayaa warqadda u gudbinta bolikiliinikada cudurada dhimirka ama laan kale oo caafimaadka dhimirka ah.
Haddii aad Finlnad ku timid qaxootinimo, waxaad Xarunta gocoshada saaykooska leh caawimaad uga heli kartaa ka soo kabashada waayo-aragnimada adag ee aad soo martay. Xaruntu waxay ka mid tahay waxqabadka Diakonissalaitos ee Helsinki, adeegyaduna macaamiisha waa u lacag la’aan. Halkaas waxaa laga helaa adeegyo gaar ah oo loogu talaggalay dadka la jirdilay. Caawimaaddu waxay noqon kartaa tusaale ahaan dhimir-daaweyn. Waxaad marka hore soo gudbin uga baahan tahay rugtaada caafimaadka. Dhakhtarku wuxuu la xaajoonayaa kaddibna kala heshiinayaa waxa mustaqbalka la qabanayo khabiirka Xarunta gocoshada saaykoos leh.
Macluumaadka la xiriira cudurada dhimirka waxaad ka heleysaa internetka ayagoo luuqado kala duwan ah
QALBIGA Ururka caafimaadka dhimirka ee Finland (MIELI Suomen Mielenterveys ry) boggooda waxaad ka heleysaa macluumaad faro-badan.
Xaaladaha adag ee nolosha
Dhibaatoyinka cudurada dhimirka
sidaa aad caawinaad u raadsaneysid
sida aad uga bogsoon kartid xanuunka
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 12.10.2021 Boggan war-celin ka soo dir